Muuqaal: Wiil Gabar U Dooneyd Riyadeeda Ugu Rumeeyey Sariirta Dhimashada Ka Hor 36 Saac - Hablaha Media Network
Muuqaal: Wiil Gabar U Dooneyd Riyadeeda Ugu Rumeeyey Sariirta Dhimashada Ka Hor 36 Saac
HMN:- Nin kasoo jeedo magaalada Tax ee dalka USA kaasoo sariir u jiifay cudurka kansarka ayaa u ballan qaaday gabar u dooneyd inuu u rumeyn doono riyadeeda ah inay is guursadaan, dhab ahaantiina wuu u sameeyey ka hor 36 saac dhimashadiisa (Maalin Iyo Bar).
Laga soo bilaabo sanadkii 2006 Ra,ul iyo Waifan Lamis ayaa is doortay, mana aysan ku deg deg inay sameystaan xaflad aroos iyagoo sheegay inay sugayaan waqtiga ku haboon, balse wuxuu u ballan qaaday inuu maalin maalmaha ka kamid ah xaflad aroos u sameyn doono.
Arooskaan ayaa maalinba maalinta ka dambeyso dib usii dhacay ilaa laga gaaray sanadkii 2012 markaas oo uu dhatar u sheegay Ra,ul inuu qabo cudurka kansarka.
labadaan is doortay ayaa xafladii arooska uga mashquulay jirada ku dhacday ninka, wuxuuna gaaray ilaa heer laga jiifo isbitaal bishii lasoo dhaafay.
Lamis ayaa tiri: ” Xaaladda way sii xumaaneysay marba marka ka dambeyi”.
Daqiiqadihii ugu dambeeyey:
Asbuucii lasoo dhaafay dhaqtarka isbitaalka St. Anthony ee ku yaal Texas ee USA ayaa u sheegay labadaan lamaane inay sameeyeen wax kasta oo dadaal ah balse wuxuu ka dhawaajiyey in xaaladda ninkaan aysan fiicneyn oo uu marayo nolosha meeshii ugu dambeysay.
Dhaqatarka ayaa ka codsay ninkaan jiran haddii ay jirto wax uu jeclaan lahaa inuu sameeyo si uu nolosha u macsalaameeyo, saaxiibtiis ayaa sheegtay in waxa kaliya ee uu jecel yahay ay tahay inuu gurigiisa iyo qoyskiisa dib ugu laabto, kadibna aan aroos dhigano.
Balse Dhaqaatiirta ayaa u sheegay inay adag tahay in loo qaado guriga maadaama uusan si fiican neefta u qaadan karin, waxayna dhaqaatiirta mar kale su,aasha ku celiyeen ninkaan iyagoo waydiiyey waxa uu jecel yahay, wuxuuna yiri : ” Waxaan jeclahay inaan gabadhaan guursado, waxaan rabaa inay xaaskeyga noqoto.
Lamis oo aheyd gabadha uu jecel yahay ayaa sheegtay inay wareertay waxayna waydiisay, “Aniga maa iila jeedaa qofka aad guuraneysid” wuxuuna dhawr jeer ku celceliyey (Haa, Haaa).
Kadib Lamis ayaa bilawday inay ilmeyso, maadama uusan ninkaan iloobin ballankii u ka qaaday ee aheyd inuu guursan doono.
Arooska Qolka Bukaanka
Isbitaalka ayaa markaas kadib bilaabay inuu diyaariyo xafladda arooska waxaana maqaayadda isbitaalka lagu soo diyaariyey sanbuus si loo siiyo dadka munaasabadda kasoo qeybgalayo, waxaana la siiyey qoyska ilaa 72 saac.
Qoyska ayaana isbitaalka keenay dharka arooska, maamulaha isbitaalkana wuxuu ugu tabarucay sigisaan.
waxaana isbitaalka ka dhacday xaflad heer sare, balse ilaahey wuxuu qadaray inuu arooska dhinto 36 saac kadib markii uu ballantii u oofiyey gabadha ay is jeclaayeen.